Shiinaha Polyurea Maqaarka EVA xumbo Buuxsamay Donut Fender warshad iyo alaab | Haohang
Qalooca leexashada xaddiga leexashada Xoog xoog xiirid Is-hagaajin ku saabsan beddelaadda heerarka biyaha Qiimaha rakibidda Qiimaha guud Guud ahaan bilaashka Shaqsiyaadka qabyada ah waxaa xakamayn kara miisaanka miisaanka Dabiicada tamarta badan waxay ka hortageysaa waxyeellada labada wejiilaha iyo maraakiibta, waxayna ka dhigeysaa operat berthing
Donut Fender waa nooc gaar ah Xumbo Fenders. Waxaa loogu talagalay inay si fudud uga dulibato hal meel oo kaliya. Dhismihiisa awgiis, feeraha ayaa kor iyo hoos u sabbeeya heerarka biyaha ee isbedbeddelaya oo wareegaya marka ay maraakiibtu kacaan oo ay ku siibtaan dhinaca dabka. Donut Fender waxaa loogu talagalay 100% unug xiran oo udub dhexaad u ah polyetylenne xumbo, maqaar elastomeric ah oo la xoojiyay iyo suufka isku dhaca hoose ee birta gudaha.
Donut Fenders waxaa laga heli karaa dhexroor laga soo bilaabo 1,270 mm ilaa 4,220 mm iyo dhexroor fara badan oo ah 610 mm ilaa 2,388 mm. Intaa waxaa sii dheer, taajyada xannibaadda, miisaan-celinta (loogu talagalay codsiyada badda hoosteeda) ama astaamo kale sida shabakadaha difaaca ayaa lagu dari karaa.
Adkaanta xumbo, dhumucda maqaarka, dhexroor / dhexroor faleebo iyo sidoo kale dhererka suunka waa la beddeli karaa haddii la codsado. ShibataFenderTeam wuu ku farxi lahaa inuu helo nashqadayntaada oo noo oggolaaneysa inaan injineerino nooca saxda ah, cabirka iyo qaabka guud ee Donut Fender.
Qalooca leexashada xaddiga
Xoog xiirid hoose
Is-hagaajin si loo beddelo heerarka biyaha
Qiimaha rakibida oo hooseeya
Guud ahaan dayactirka waa lacag la'aan
Qoraallada shaqsiyeed waxaa xakameyn kara miisaanka culus
Nuugista tamarta sare waxay ka hortagtaa waxyeellada soo gaadhaysa labada weel iyo maraakiibta dillaacsan waxayna ka dhigaysaa hawlgallada goosgooska mid sahlan oo ammaan ah.
Waxaa laga soo saaray agab waara oo lagu kalsoonaan karo si loo yareeyo kharashka dayactirka loona kordhiyo waxqabadka iyo inta uu nool yahay oo kale
Qalooca hoose wuxuu muujinayaa Nuugista Tamarta ee loo tixgeliyo HAOHANG Donut Fender oo ka hooseysa% ka mid ah Cadaadiska. Kaliya hal dhinac oo Fender ah ayaa shaqeynaya inta lagu jiro cadaadiska oo ma ahan dhexroorkiisa oo dhan. Waxqabadka waxaa badiyaa la siiyaa riixitaan ah 60% si kastaba ha noqotee cadaadiska sare ayaa mararka qaarkood la oggol yahay inta lagu jiro muddooyinka gaaban ee shilalka ay dhacaan.
Leexashada oo ka sareysa 75% haddii la adeegsado saacado badan waxay yareyn doontaa awoodda xumbada inay ku soo kabato qaabkeedii hore. Si kastaba ha noqotee way sii wadi doontaa inay caymiso shaqadeeda sugida. Fadlan ogow in cadaadisyada noocan oo kale ah ay jirto khatar waxyeello u geysata qaybaha birta gudaha ee Donut Fender.
Qaabka “Reaction Force” Qalooca wuxuu muujinayaa xoogagga laga sameeyay labada markab ee Maraakiibta iyo Birta loo yaqaan 'Monopile Steel' inta lagu gudajiray iskudajinta Donut Fender.
Qufulka darfaha gelitaanka / bixida geeska
Loogu talagalay in lagu ilaaliyo meelaha laga soo galo Harbor sida docks, qufulka ama hage ahaan maraakiibta ka weecanaya waddooyinkooda caadiga ah.
Naqshadeynta xaglaha oo soo bandhigeysa dareen jilicsan haddii ay saameyn ku yeelato wejiga hore
Tilmaamaha tooska ah ee lagu hagaajinayo Markabka dariiqiisa iyadoo laga fogaanayo waxyeello culus oo soo gaadha qolalka qolalka iyo dhagxaanta.
Qiyaasaha iyo Qaababka waxaa loo xisaabiyaa iyadoo la tixgelinayo astaamaha Markabka iyadoo la yareynayo ballaca suunka ugu yar.
Dhowr hab oo hagaajin ah ayaa la heli karaa: Tusaale ahaan, Fender-ka ayaa lagu dhejin karaa saxan bir ah, oo lagu dhejin karaa gidaarka jetty / Quai; lagu hayo fiilooyin ama silsilado iyo / ama lagu xirayo.
Codsiga Donut Fender
Qufulka iyo iridda laga galo ee qallalan, ilaalinta geeska, rogaya dolphins, aagagga leh kala duwanaansho badan oo isdaba joog ah ama ilaalinta buundada
Dhismayaasha kale ee monopile
Diyaarado quus ah
Hore: Doonida Guriga Pontoon ee iibinta Hot Hot Dock Airbag
Xiga: Nooc Adag oo Adag Nooca Nooca V Nooca W Nooca M Nooca Rubber Fender Strip
Barkinta Hawada Badda, Boorsada Hawada ee Markabka, Shiinaha Rubber Fender, Maraakiibta Tec, Block isku dhafan, Fender Rubber,